भोकै बस्न बाध्य मज-दुर भन्छन् – यो सं’कटमा नदिएको चामल चुनावमा चाहिँदैन । – Yuwa Aawaj
भोकै बस्न बाध्य मज-दुर भन्छन् – यो सं’कटमा नदिएको चामल चुनावमा चाहिँदैन ।
जेठ २३, २०७८ आइतबार 390
गुल्मी : रेसुङ्गा नगरपालिका–७ छेंडापोखरीका दलित परिवारहरु दैनिक गुजाराका लागि समस्यामा परेका छन् । दैनिक म’जदुरी गरेर दुई छाक टार्दै आएका उनीहरु लामो समयदेखि नि’षेधाज्ञा जारी रहेपछि काम गर्न नपाउँदा भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
स्थानीय विष्णु परियारका अनुसार उक्त टोलमा ९ घरपरिवार दलि’त छन् । दैनिक ज्याला मज’दुरी गरेर जीविकोबपार्जन गर्दै आएका आफूसहित ती घरपरिवार अहिले दुई छाक टार्ने समस्यामा पि’ल्सिएको उनले बताए । चुनावको समयमा नेताहरुले द’लित घरपरिवारलाई चामलसमेत बाँड्ने गरेको
स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यस्तो सं’कटका बेला कसैले वास्ता गरेनन्, संकटमा नपाएको चामल चु’नावमा चाहिँदैन ।’उनका अनुसार नजिकैको बुट्टाकुरी टोलमा रहेको द’लित बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ । दलित परिवारमात्र होइन, दैनिक मज’दुरीबाटै जीविको’पार्जन गर्दै आएका गैरद’लितको अवस्था पनि ना’जुक छ ।
इस्मा गाउँपालिका–२ उजुङ्ग घर भई तम्घासको पुतली बजारमा डेरा गरी बस्ने गंगाबहादुर ठकुरीले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको पी’डा सुनाए ।
उनको परिवारमा बुहारी र दुई नाति छन् । नि’षेधाज्ञा अघिसम्म बुहारीले होटलमा भाँडा माझ्ने, अरुको कपडा धुने गरेर गुजारा चलेको उनले सुनाए । ‘म बुढो मान्छे, काम गर्न सक्दिँन,’ उनले भने, ‘कमाउन भनेर हिँडेको छोरो सम्पर्कमै छैन । हामीलाई अहिले दुई छाक टार्न सकस छ ।’
रेसुङ्गा नगरपालिका–८ का डिलबहादुर नेपाली आफूहरु समस्यामा पर्दा कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गर्छन् । निषेधाज्ञा जारी भएपछि काम नपाउँदा पेट भर्न समस्या भएको उनले बताए । ‘चुनावमा चामलमात्रै हो र ! पैसा पनि बाँड्थे नेताहरु । अहिले हामीलाई यत्रो संक’ट पर्दा कोही वास्ता गर्दैनन् ।’
गत वर्ष लक’डाउन भएको दोश्रो हप्तादेखि स्थानीय सरकारका तर्फबाट खाद्यान्न राहत बाँडिए पनि यो वर्ष यतिका दिनसम्म निषे’धाज्ञा भएर आफूहरु सकसमा पर्दा कसैले वास्ता नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल तत्काल त्यसरी राहत बाँ’ड्नेबारे योजना नबनेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ गुल्मीले कोभिड पीडित मज’दुरका लागि राहत अभियान सञ्चालन गरेको छ । सो अभियानमार्फत जिल्लाका २१ सञ्चारकर्मी र एक दर्जन मज’दुरहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । थप दुई दर्जन मजदुरलाई पुग्ने रासन संकलन भएको अभियानका सचिव मनु सुनार मनसुनले बताए ।-रातो पाटी
Prevशर्मिला गुरागाईं भन्नुहुन्छ : छ महिना बन्द भए पनि आफ्नै कमाइले खर्च पुग्छ ।
Nextआमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पु’र्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठे’रो छ, नलडी जानु है !
सभामुख भन्नुहुन्छ : पद छाड्न तयार छु तर MCC पास हुन दिन्न ।
राेकिएन नेपाली भूमिमा एसएसबीको दादा-गिरी, धेरै बोले खेतबाटै उठाएर लग्ने ध’म्की ।